Mapisarema 24 anoreva vhesi nendima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Pisarema 24 rinoreva vhesi nendima
Pisarema 24 rinoreva vhesi nendima
Nhasi tichave tichiongorora Pisarema 24 rinoreva vhesi nendima. Chimwe chezvinhu zvinoshamisa pamusoro penyika kubwinya kwaMwari pamusoro pacho. Zvakare, rimwe remavhesi anoshamisa kwazvo ari muBhaibheri Mapisarema. Zvizhinji zveizvi Mapisarema zvakanyorwa kubva kukurudziro ye Mweya Mutsvene, zvimwe zvakavanzika zvakaziviswa kuburikidza neMapisarema hazvigone kuwanikwa nenyama kana kubudikidza neruzivo rwekufa kwemunhu. Ivo vanogona chete kutorwa kuburikidza nekubata kweMweya Mutsvene. Kana Mweya Mutsvene wasvika, chikamu chechizaruro chovhurwa, uye vanhu vachatanga kuona zvinhu zviri zvehuMwari.
Kufanana nemamwe Mapisarema, Mapisarema 24 inotaura nezve Kubwinya kwaMwari uye neHumambo Hwake pano pasi nekudenga. Kunyanya zvakadaro, iri Pisarema nderekudzokorora kwekukoka Mweya Mutsvene mukuungana. Nekudaro, iyo inodzidzisa kuti chete vanhu vane maoko akachena uye nemoyo wakachena. Izvi zvinotsanangura kuti Mwari havagari munzvimbo izere nezvakaipa.
Zvinorehwa nePisarema 24 vhesi nendima
Ndima 1 Nyika ndeyaIshe nekuzara kwayo, Nyika nevagari vayo.
Iyi vhesi yekutanga inotaura nezvekuringana kwepasi. Zvinoratidza kuti pasi nezvose zvinogara mairi ndezvaMwari. Miti yemunhu nemhuka zvese ndezvaMwari nekuti ndiye akavasika vese
Ndima 2 Nekuti wakaiteya pamusoro pamakungwa, Nokuisimbisa pamusoro pemvura.
Ndima yechipiri yePisarema 24 yakatsanangura masikirwo akaitwa Mwari neakasika. Rangarira kuti mubhuku raGenesi chitsauko 1, rugwaro rwunoti nyika haina chimiro uye mweya waIshe wakayenda pamusoro pemvura. Mwari vakasika ivhu pamvura, izvi ndizvo izvo ndima yechipiri yePisarema iri kuyedza kutaura.
Ndima 3 Ndiani angakwira mugomo raJehovha? Ndiani ungamira panzvimbo yake tsvene?
Ndima yechitatu yePisarema 24 iri kubvunza mibvunzo pamusoro pekuti ndiani anogona kumira munzvimbo inoyera yaMwari kana ndiani anogona kukwira mumakomo aJehovha. Izvi zvinotiita kuti tinzwisise kuti havasi vese vakakodzera kumira pamberi paMwari uye ndosaka mubvunzo uyu uchibvunzwa kuti Ndiani ungakwira mugomo raIshe? Uyu mubvunzo wekukodzera.
Verse 4 Uyo ane maoko akachena nemoyo wakachena, Asina kusimudzira mweya wake kuzvidhori, Kana kupika nhema.
Ndima 4 yakapa mhinduro kumubvunzo wakabvunzwa mundima yapfuura. Zvino, avo chete vane maoko akachena nemoyo wakachena vanogona kukwira muchikomo chaIshe. Ava vanhu vasina kusimudzira mweya yavo kuzvinhu zvisina zvazvinobatsira kana kupika nekunyengera. Izvi zvinosimbisa izwi raIshe iro rinoti maziso aMwari vakarurama kwazvo kuti vaone zvivi. Avo vane maoko akachena zvinoreva kuti kururama kunogona kumira munzvimbo inoera yaMwari.
Ndima 5 Iye achapiwa mukomborero naJehovha, Nokururamiswa naMwari muponesi wake.
Chero ani zvake akakodzera kukwira mugomo raIshe kana kumira munzvimbo yake Tsvene anowana makomborero kubva kuna Mwari. Muenzaniso usingaperi ndiAbhurahama, mavakirwo aakavaka hukama hwakanaka naMwari uyo Mwari aifanira kuudza Abhurahama zvese zvaari kuda kuita. Rugwaro runoti ini handichaita chinhu ndisina kuudza shamwari yangu Abraham. Uye zvechokwadi, Abhurahama akagamuchira chikomborero kubva kuna Mwari, imwe yemaropafadzo ndeyekuti anonzi baba vemarudzi mazhinji.
Verse 6 Uyu ndiJakobho, chizvarwa cheavo vanomutsvaga, Vanotsvaka chiso chako.
Rugwaro rwakadana chizvarwa cheavo vanotsvaga Mwari chizvarwa chaJakobho. Yeuka kuti Jakobho akatsvaga sei Mwari paakawana kusangana kwakachinja hupenyu hwake kuti huve hwakanaka.
Ndima 7 Simudza misoro yako, haiwa iwe magedhi! Uye kukwidziridzwa iwe magonhi asingaperi! Uye Mambo wokubwinya uchauya achipinda.
Iyi vhesi iri kupa kukoka kuna mambo wekubwinya kuti upinde ugare muhupenyu hwako uye hwekumusha. Iwo magedhi ndiwo anovhiringidza kana zvipingamupinyi muhupenyu hwedu kana imba ingangoda kumisa mweya waMwari kuti ugare muhupenyu hwedu kana imba. Izvi zvekuvhiringidza zvinogona kuve zvivi kana chero kukanganisa.
Ndima 8 Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Ndiye Jehovha ane simba noumhare, Iye Ishe anondondo.
Uyu mubvunzo wechokwadi wakabvunzwa kuti uzive chaizvo kuti mambo wokubwinya ndiani. Izvi zvakafanana nemubvunzo wakabvunzwa nemadhimoni kuvana vaShiva, kuti Jesu watinoziva, Apostle Paul watinoziva, asi ndiwe ani? Uyu ndiwo mubvunzo mumwe chete uyo madhimoni uye muchengeti wegedhi vari kubvunza iye mushambadzi. Uye kwakave nemhinduro pakarepo zvichidudza kuti Ishe unesimba uye une simba, Ishe une simba pakurwa ndiye mambo wokubwinya. Ishe vane simba uye vane simba ndiJesu Kristu.
Ndima 9 Simudza misoro yako, iwe magedhi! Simudzai, imi magonhi akare-kare; Uye Mambo wekubwinya achapinda.
Ndima 9 yePisarema rinodzokorora chirevo chakapfuura nekuda kwezvinangwa zvekusimbisa. Kuudza vachengeti vegedhi kusimudza misoro yavo kuti mambo wokubwinya apinde agare munzvimbo yacho.
Ndima 10 Ndianiko uyu Mambo wokubwinya? Jehovha wehondo, Ndiye Mambo wokubwinya.
Ndima yekupedzisira inosimbisa mibvunzo yakabvunzwa mundima dzakapfuura nezvekuti mambo wekubwinya ndiani. Izvi ndezvekunyepedzera zvinangwa.
NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM 24?
Kana uchinzwa kushaiwa chinhu uye kushayiwa kweMweya Mutsvene
Kana iwe uchinzwa iwe wakakodzera chikomborero kubva kuna Mwari
Iyo Pisarema rakakwana rekutaura minamato yehondo
Iro Nduyo yekusimudzira kubwinya kwaMwari
PSALM 24 MINYENGETERO:
Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo minamato iyi ndeyako:
Ishe ndinokumbira kuti Mweya wenyu Mutsvene ugare muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinokumbira kuti muchenese moyo wangu uye mushambidze maoko angu kuti ndikwanise kumira pamberi penyu nemuzita raJesu.
Ishe ndinotora simba pamusoro pezvese zvamakagadzira muzita raJesu.
Ini ndinosimudza muzita raJesu kuti kubwinya kwaMwari kuitwe kuve kwakakwirira muhupenyu hwangu.
Previous nyayaMapisarema 9 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 32 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
Kununurwa Munamato pamweya wehupombwe